पठाउने म्यानपावर नै बेपत्ता भयो, छोरो कसरी भेटिएला ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 Rojgari Khabar पठाउने म्यानपावर नै बेपत्ता भयो, छोरो कसरी भेटिएला ?
पठाउने म्यानपावर नै बेपत्ता भयो, छोरो कसरी भेटिएला ?
Marganugamidaily प्रकाशित समय 7:57:00 PM
सिरहा, ४ फागुन । दुई दिनपछि पैसा पठाउँछु भनेर फोन राखेको छोराले दुई वर्ष बित्दा पनि फोनसमेत नगरेपछि सिरहाका करिचन चमारको मन ठेगानमा छैन । करिचनका छोरा विशेश्वर महरा झण्डै सात वर्षअघि मलेसिया गएको थियो ।
छ वर्षसम्म विशेश्वरले घरमा नियमित फोन गर्दथ्यो । बुवाआमालाई खर्च पनि पठाउथियो । तर छोराले एक्कासी फोन गर्न छाडेपछि भने करिचनको भोक निद्रा हराएको छ । ‘पैसा पठाउँछु भनेको छोरो न फोन गर्छ न यताबाट गर्दा लाग्छ, मेरो त भोक निद्रा हरायो, लौन कसरी खोज्नेहोला, करिचन छोराको फोटो देखाउँदै सोध्छ । करिचनलाई छोरा हराएको पीडाले थलिएकी श्रीमतीलाई सम्हाल्न गाह्रो छ । विशेश्वरकी आमा छोरा हरायो भनेर बर्बराइरहन्छ । ‘जतिबेला नि फोन गरेन भनेर भन्छे आमाले । मैले के जवाफ दिने, छोरा तँै भन, करिचन छोरालाई जसरी पनि फोन गर्न अनुरोध गर्छ । छोराले किन फोन गर्न छाड्यो भनेर करिचनले अड्कल पनि काट्न सकिएको छैन् । उनलाई लाग्छ छोरा समस्यामा प¥यो होला । ‘मलेसियामा छोरो कस्तो समस्यामा छ थाहा छैन । हामी यहाँ छोरा बिना पीरको भारीले थिचिएका छौं, करिचनले भने ।
करिचन पीडा भुलाउन गाउँ डुल्छ । छिमेकीसँग कुराकानी गर्छ । छोराले फोन आउला कि भनेर कुर्छ । मलेसिया गएको थाहा भएपनि उनीसँग छोराको बारेमा कुनै जानकारी छैन । विशेश्वरले जाल फ्याक्ट्रिमा काम गर्छु भनेर फोनमा भनेको थियो । महिनाको ४५ हजार रुपैयाँ कमाई हुन्छ पनि भनेका थिए । विशेश्वर आफ्नै मामा अजोदी मोचीमार्फत एकलाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया गएको थियो । ‘अहिले त छोरो पठाउने म्यानपावर पनि बेपत्ता छ रे खै छोरोलाई के भयो, विशेश्वर भन्छ ।
करिचनले विशेश्वरको खोजीका लागि अजोदीमार्फत म्यानपावर पनि पुगे । तर म्यानपावर नै भेटिएन । छोराको खोजी गरिदिन उनले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना(सामी) अन्तर्गत सूचना केन्द्र सिरहामा अनुरोध गरेको छ ।
#Breaking #Headline1 #Headline2 #Rojgari Khabar